Sei Us - Mandarin Morning Chinese School
The mutauro wakajeka uye yekare China: Mandarin. Tichiteerera Chinese kukurukurirana sokuti mashoko uri kuteerera, panguva imwe chete kuti pave nekukurukurirana dzinotevedzana Animations pfupi kuti pamberi pameso enyu. Hazvishamisi, yayo Han ZI (Chinese Script), vatambi ayo zvose zvinobva mifananidzo, nyaya dzavo! Chinese vatambi avo maumbirwo mutauro panguva imwe nguva achibvumira kuti rakakura mukana wokushandiswa, kukupai kugona kutaura pachako zvakarurama uye zvine simba. Uye hazvishamisi isu kukosha zvakakwana yokuteerera unyanzvi, sezvo unyanzvi aural vari fanira kudzidza kukurukurirana muna saka hwokufananidzira Chinese nzira.
Vedu-imba akagadzirirwa 1-2-3 Learning Cycle zvakazara inobvuma izvi nezvimwewo kunyatsogona mutauro Chinese. We anoora mutauro kuti munoona kunzwisisa chinoumba kwayo panguva imwe chete, isu chete kutanga kushandisa,. Uye haisi kuti wakafanana ukaziva rurimi mai vako, apo kushandisa uye kunzwisisa zvinofambidzana muruoko?
EAST ANOSANGANA WEST
"Mudzidzisi, ndechipi L ogic Mandarin ? Avo mitemo zvose zvamuchandipa, vanoita musoro wangu kuruka! Kana aigona chete kutsanangura kwandiri pfungwa dzayo, ndingadai achinyatsogona pamberi munoziva! "
Hongu, Zvaiita kuti madzidzisiro dzakashandiswa, aisagona kungoenda uchitevedzera musiyano pakati Western (non-Chinese) mafungiro uye Chinese mafungiro, pakati mitauro Western uye Mandarin. Pane kupa kunzwisisa, mitemo zvaipirwa, uye kunyange zvakawanda mitemo.
Kuti Mandarin upenyu nyore vadzidzi chikwata yedu akauya aine nzira itsva rinonzi Slow Motion Technique . Slow Motion chidobi zvirokwazvo zvinoratidza here pfungwa Mandarin, uye zvakakosha, anodzidzisa iwe Mandarin pamwe chete nokutonga ONE pachinzvimbo dzakawanda, uye izvo mudzidzi angasada kuti?
Pane zvinhu here dai maindiziva kwokutanga, zvakanaka Slow Motion Technique kwandiri mumwe wavo. Ndinovimba uchazviwanazve sezvo zvinobatsira sezvandaiita panguva!
Hazvina basa redu kuparadzira yakanaka Chinese mutauro kuburikidza vatinodzidzisa inonyanya madzidzisiro zvinobvira, chero zvavo vavariro, background kana zera, uye kwose vari.
Kuti kuita kudaro isu wechi yakanakisisa vadzidzisi uye yakatanga dzedu nedzimwe dzidziso pfungwa, ichibereka zvibereko kupfuura tarisiro.
Kwakavakirwa chiratidzo yedu huru zvinhu ndeinotevera.
Mandarin Morning kusvika
2 MUNA 1 ne2 Plus 1 hweutungamiri
Kwakarongwa kunoita iwe kubudirira Mandarin wako kudzidza chinangwa, panguva iyoyowo achigadzirira kuti zvakaitika Chinese bvunzo
Extra mapoka kunodiwa kugadzirira bvunzo
Clever Learning, kushandisa kwedu Slow Motion Technique
Motion yedu Slow Technique pachena chinoumba rechokwadi Mandarin, iyo boosts kudzidza kwako nokukurumidza zvikuru
Chinoumba Mandarin haina kuratidzwa
NYORE nomusoro, kushandisa kwedu Structure Map
We anoora mutauro Chinese mumitauro zvinokosha Dzokuvaka. Izvi zvinoita nyore kunzwisisa uye nokudaro nyore kuyeuka nayo
Nomusoro chete nokudzokorora
FUN Achishandisa, anoshandura Knowledge wako Unyanzvi nokuda vakawanda nzira vanoita
Games, mumhanzi, nhetembo, mafirimu, mitambo ea. vanoumba chikamu chinokosha nzira yedu, kwete chete panguva pamapoka edu asiwo kure kembasi uye pashure chikoro
Imwe nzira somuKristu: chete kushandisa mabhuku
Kwezvipimo nzira yokudzidzisa
Mandarin Morning nzira yokudzidzisa inoshandiswa nevadzidzisi vose kuwana madzidzisiro
Teaching nzira zvinoenderana vadzidzisi: Vadzidzisi siyana vanoshandisa nzira dzakasiyana
Nguva kwakarongwa kuvandudza
Kwakavakirwa mudzidzi 's inofambiswa uye vadzidzisi kukura ruzivo isu nguva kuvandudza mapoka edu kushandisa KUITA-DO-UONE-ITA kutenderera
No aifarira-basa hweutungamiri kuvandudza
Kana muine mibvunzo pamusoro chikoro yedu uye zvirongwa zvedu, tinya bhatani pazasi uye taura nesu!